China High Speed ​​Gantry hwokugaya hwakabvira Machine fekitari uye vagadziri | Oturn
Chigadzirwa Chinyorwa SG1614 yakaitwa yakasarudzika gungano maitiro ekambani uye yakaratidza kukwirira kwakaringana, kugona kwakanyanya uye kugadzikana kwepamusoro mumusika.
SG1614 yakawana yakasarudzika gungano maitiro ekambani uye yakaratidza kukwirira kwakaringana, kushanda kwakanyanya uye kugadzikana kwepamusoro mumusika.
Zvakanakisa zvishandiso zvemuchina zvinoratidzwa muforoma yekugadzira indasitiri, indasitiri yekugadzira mota, chaiyo zvigadzirwa zvekurapa, indasitiri yemuchadenga uye mimwe minda. Nekombiki yepamusoro uye yakanakisa mashandiro emuchina, ivo vakahwina rumbidzo yakanaka uye vakave vakatsigirwa zvakanyanya nekusimbiswa nevatengi vatsva nevakuru. Uye vimba.
Iyo fuselage chimiro inotora dhizaini-inotsigirwa yakazara, uye simulation yekombuta
chimiro chemuviri kuongorora kunoitwa kune yakakosha kushushikana zvikamu. Mushini hwaro
inotakura simba re4000kgf uye kushanduka kwayo kuri mukati me0.01mm. Inogona kumira zvizere
kuomarara zvinodiwa zvekucheka.
Iyo mbiru inotora yakasanganiswa gantry chimiro uye inowedzera nzvimbo inotsigira kuona kuti chokurukisa uye chakatwasuka kumhanya-kumhanya kushanda, uko kunogona kuwedzera
machine kuomarara uye kugadzikana kwehupenyu hwebasa. Yakashongedzerwa neyekumhanyisa-yekumhanyisa chindori, inogona kusangana nyore nyore neyakaomeswa yekucheka zvinodiwa zveyakaomeswa chiwanikwa simbi.
Yekutanga-kirasi yepamusoro-yakanyatsoita roller linear gwara rakatorwa kubva kuGerman neTaiwan
bhora sikuruu inoshandiswa kuona iyo geometric kunyatsoita uye kumisikidza chaiyo yeiyo yakazara mamiriro, kugadzikana uye hupenyu hwebasa.
Iyo servo drive inoshandisa iyo yeGerman yekutanga-kirasi brand, iyo iri yepamusoro kune vakwikwidzi mu
iro rakaenzana danho maererano nekubuda torque uye chaiyo yekumisikidza kurongeka.
Iyo yekumhanyisa-kumhanya yakavakirwa-mukati chokurukisa uye inonzwisisika dhizaini dhizaini inogonesa zvizere kuti iyo
chokurukisa anogona kuramba yakatsiga uye yakarurama oparesheni panguva mukuru-nokukurumidza kuramba
mashandiro, uye inogona kuwana yakakwira-chaiyo uye yakakwira-kubwinya kugadzirisa maitiro panguva yekucheka maitiro.
Iyo yekumhanyisa yekumhanyisa kumhanya kweatatu-akabatana emuchina chishandiso inogona kusvika 24m / min, uye yekumhanyisa kumhanya inogona kusvika kune huwandu hwe0-10M / min, iyo inopfupisa nguva yekugadzirisa uye inovandudza kushanda kwebasa. Chokurukisa inosimbisa yakakwira torque kuburitsa
uye yakanaka kurongeka uye kuvimbika panguva yekucheka mashandiro. Pasi pemamiriro ekumhanyisa-kumhanya, iwo ekumisikidza mabasa anogona kupedzwa pamwe nekunyatsoshanda.
Iyo yekumhanyisa-mhanya komputa sisitimu inotsigira iyo yekufanotaura mashandiro emahombe-kugona machining zvirongwa, uye inogona kufanotaura mazana maviri-chikamu chikamu mashandiro ekuvimbisa kuona kuti hakuzove nekunonoka mukukwirira-kumhanya kucheka, uko kunogona kuchengetedza nguva yekufambisa uye kuwedzera kugadziriswa kwekuita ne20 %.
X akabatana kufamba (mm)
Y akabatana kufamba (mm)
Z akabatana kufamba (mm)
Nzvimbo inoshanda (kureba x upamhi) (mm)
Kure kubva patafura yepamusoro kune yekumusoro kumagumo pamusoro (mm)
Musuo upamhi (mm)
Chokurukisa simba (KW)
Saizi yemuchina (mm)
Kudzora system: Siemens 828D
Kudzora system: Mitsubishi M80A. FANUC 0i M
Chokurukisa kutonhora hurongwa
Inovakwa mune chokurukisa 20000rpm (HSK-A63)
Chokurukisa mhete pfapfaidzo kutonhora
Yakazara yakavharidzirwa nebutiro repamusoro
CNC muhombe tafura (The 4th akabatana)
3-ruvara chiratidzo cherambi, rinoshanda mwenje
Zvishandiso zvakajairika zvebasa
Helix chip inofambisa
Mhepo inogadzirisa yemagetsi kabati
Pashure: Heavy Duty Gantry hwokugaya hwakabvira Machine
Zvadaro: Drilling Uye Tapping Combined Machine